I-KDE esheshayo nenhle kuvulekileSUSE 13.2 Harlequin - Amanethiwekhi we-SMB | Kusuka kuLinux
I-KDE esheshayo nenhle ku-openSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks
phico | | Amanethiwekhi / Amaseva
Inkomba ejwayelekile yochungechunge: Ama-Computer Networks ama-SME: Isingeniso
Inhloso enkulu yalokhu okuthunyelwe ukukhombisa ukuthi singalifinyelela kanjani ideskithophu - Ubuso bekhompyutha base ngokucushwa kokuqala kokuqala, ngoba sesivele sine- I-DNS - DHCP kunethiwekhi, futhi asidingi ukumisa mathupha isikhombimsebenzisi senethiwekhi.
Sinqume ukwenza ideskithophu ngenguqulo evulekileSUSE 13.2 Harlequin, futhi ungabe usalinda ukuthola ukufakwa kwe-DVD yokufaka kanye nezinqolobane zenguqulo 42.2 Gxuma. Ngokwalokho umngane wami nozakwethu abangitshele khona, Ing. U-Eduardo Noel Núñez, inqubo yokufaka ayihluka kakhulu phakathi kwezinguqulo ngaphandle kokuxhuma kwamanani okuzikhombayo.
1 Ukufakwa kwezinyathelo ngezinyathelo ngezithombe
1.1 Ukusekelwa kokufakwa
1.2 Ukufaka, ukumenyezelwa kwamakhosombe nokuvuselelwa kwesistimu
2 Ezinye izilungiselelo zokuqala
Ukufakwa kwezinyathelo ngezinyathelo ngezithombe
Sithathe izikrini ezingama-51 sezizonke ukukhombisa iSinyathelo ngesinyathelo ngokuthembeka ngangokunokwenzeka. Esikrinini ngasinye sokufakwa, vulaSUSE Kwenza umsebenzi wethu ube lula ngokuba khona kwenkinobho yosizo - Usizo imvamisa itholakala kwesokunxele esingezansi.
Ngeke sinikeze incazelo yesithombe-skrini ngasinye njengoba sithathwa njengesingafuneki. Njengoba isisho sithi, «Isithombe sibiza amagama ayinkulungwane".
Uzobona izithombe eziningi ezifana nalezo ezithwetshulwe ku- edlule post, kepha kufanelekile ukubakhombisa ngokuphelele kulokhu, ukuze kungadingeki ukusuka ekhasini elilodwa lewebhu kuye kwelinye. Le yindlela esenza ngayo ukufunda kube lula.
Njengendawo yokufaka sisebenzisa isithombe se-DVD ukuvulaSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso. Uma okokusebenza kungenaso isidlali se-DVD, noma uma kulula ngathi ukusebenzisa imemori - shayela peni, singakwenza njengoba kukhonjisiwe endatshaneni Imemori ene-autostart ukufaka i-Debian, i-CentOS, noma i-OpenSUSE. Ngemuva kokuthi uhlelo lokusebenza selufakiwe, uhlelo lungafakwa futhi lusetshenziselwe ukulungiselela imemori Umbhali wesithombe nguSUSE Studio.
Noma kunjalo siphakamisa test ekuqaleni emshinini obonakalayo.
Ukufaka, ukumenyezelwa kwamakhosombe nokuvuselelwa kwesistimu
Siphakamisa ngomshini obonakalayo openuse-desktop.fromlinux.fan cishe ama-megabyte angama-768 we-RAM kanye ne-hard drive eyi-20 - 80 GiB, kuya ngokuthi izosetshenziswa kanjani futhi uma kwenzeka ufuna ukuzama ukudlala amafayela wemultimedia kuyo.
Samukela ngokuzenzakalela ifayela le- Isiphakamiso sokuhlukanisa okunikezwe uhlelo lokufaka, njengophawu lokuzethemba kulwazi lwe-openSUSE kulezi zici.
Uma ungeke uvivinye kuqala emshinini obonakalayo bese unquma ukukwenza ngqo kwiDeskithophu yakho, Qaphela kakhulu ukungalahli idatha ekhona kuma-hard drive akho. Qaphela kakhulu ngohlelo lwefayela - Uhlelo lwefayela kukhethiwe. Qaphela kakhulu ngokungashintshi uhlelo lwefayela lokwahlukanisa nedatha, futhi ungalufomathi.
Yize sikhombisa amadeskithophu angahle akhethwe, ekugcineni sikhetha ifayili le- KDE. Sikholwa ukuthi ukusebenzisa ideskithophu ngaphandle kwe-KDE kufayela le- vula ideskithophu, konke ukuntuleka kwenhlonipho Ithimba le-OpenSUSE. 😉 Noma kunjalo, zizwe ukhululekile ukukhetha eyodwa oyithandayo bese uzama.
Igama lomsebenzisi okhethiwe «buzz»Ukuhlonipha uDebian, ukusatshalaliswa kwethu esikuthandayo. Kepha lutho. 😉
Thatha isikhathi sakho ukhetha isoftware ozoyifaka. IMenenja yePhakeji ebabazekayo kufanele izulazule, njengoba kukhonjisiwe kufayela le- izithombe 13, 14, 15 no-16.
Izithombe 24, 25 no-26Ngemuva kokufaka isistimu yokusebenza kusuka kwi-DVD noma eminye imidiya, into yokuqala okufanele uyenze ukuguqula igama lekhompyutha nesizinda njengoba kudingeka. Igama lesizinda alidingeki kangako njengoba lisethwe ngeseva ye-LAN ye-DHCP. Lokhu sikwenza ngokusobala ukugwema amaphutha.
Izithombe 27, 28, 29, 30, 31 no-33: Isimemezelo sezinqolobane zokuvuselela isistimu yethu, kungaba ngeyasekhaya noma kwi-Intanethi. Njengoba senzile esihlokweni edlule Sikhubaza amakhosombe ahlukene avulwa yi-openSUSE kumaseva awo akwi-Intanethi, futhi sengeza okwethu okwendawo. Okungukuthi, siyaqhubeka nezinqolobane ezifanayo: Database, Packman, Updates, I-Oss y Okungeyona i-Oss, ukusenzela ideski ngawo wonke umthetho. Bayasithethelela uma kulahleka iphasela elincane okufanele liseshwe futhi litholakale kwi-Intanethi. 😉
Izithombe 35, 36 no-37: Iqala futhi iphetha ukuvuselelwa kweMenenja yePhakeji ye- I-YaST. Esikrinini sokuqala sishiya izinketho ezizenzakalelayo. Sichofoze nje inkinobho Faka isicelo.
Izithombe 38, 39, 40, 41, 42 no-43: Ngemuva kokuthi iMenenja yePhakeji izibuyekeze yona, ivula isikrini ngamaphakeji asuka ohlelweni oluzobuyekezwa. Kuyo, samukela nezinketho ezizenzakalelayo.
Ngaphandle kwesithombe: Asizange sibambe izikrini zenqubo yokuqalisa kabusha uhlelo okufanele lwenziwe ngokulandelayo, nenqubo yokungena ngemvume, ngokubheka ukuthi yaziwa kakhulu ngabathandi be-KDE. Kodwa-ke, uma ufuna ukubona isithombe sokungena ngemvume, sicela uthokozele i- Isithombe se-21. 😉
Ezinye izilungiselelo zokuqala
Izithombe 44, 45 no-46: Simemezela ku I-Firewall - firewall ukuthi isikhombimsebenzisi senethiwekhi eth0 ungowaka Indawo Engaphakathi noma ku-LAN ye-SME yethu.
Izithombe 47 no-48: Sibuyekeze safaka imikhiqizo eyengeziwe evulwa yi-openSUSE. Akusona isinyathelo esiyimpoqo, kepha kuyanconywa.
Izithombe 49 no-50: Uhambo oluncane lwezintandokazi zohlelo ezaziwayo zemvelo yedeskithophu ye-KDE.
Isithombe se-51: Faka noma ususe izinhlelo usebenzisa imodyuli ye-YaST.
Silinde wena ku-adventure elandelayo!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Amanethiwekhi / Amaseva » I-KDE esheshayo nenhle ku-openSUSE 13.2 Harlequin - SMB Networks
Iposi Elihle…. Halala
Ngisuse i-opensuse kwikhompyutha yedeskithophu, ngoba ngokuhamba kwesikhathi kugcine ukwahlukaniswa kwesistimu kugcwele futhi angikwazanga ukuyihlanza, ekugcineni ngigcine ngokufaka i-kde neon futhi enkulu ngoba nge-kde neon ihlala ku-9G nayo yonke into efakiwe. Kwikhompuyutha ephathekayo ngine-manjaro kde, ibuye futhi ibe nkulu futhi ungahlanza uhlelo njengo-kde neon.
Gonzalo Martinez kusho
Ngishayela ihlombe izindatshana ezingakhulumi ngeDebian, Arch, noma Ubuntu.
Ngaphezu kwalokho, ngibhale izindatshana zama-software zamahhala ezithangamini noma amabhulogi e-Uruguay, futhi ngangihlala ngibabiza ngokuthi "NgeLinux", hhayi iFedora, okuyisabelo engihlala ngisisebenzisa ngaphambi kokusebenzisa iMac. Ngicabanga ukuthi ngivalela konke kwabanye Ukwahlukaniswa kuveza inkululeko engaba khona kusoftware "ekhululekile" emenyezelwa abaningi, ngoba kubantu abangenalo ulwazi oluningi kusho ukuthi le software izosebenza ku-Ubuntu kuphela ngokwesibonelo, futhi uma lowo one-OpenSUSE engenawo umqondo omningi usekugcineni.
Phendula uGonzalo Martinez
Alejandro TorMar: Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula nangokuhlola kwakho i-athikili. Ngikumema ukuba uqhubeke nathi uchungechunge lwe-PYMES.
I-Carlidov: Ngafaka i-BleachBit zombili ku-dns.fromlinux.fan, naku-openuse-desktop.fromlinux.fan, futhi kuzo zombili lezi zinhlaka ihlanze ukwahlukanisa lapho uhlelo lokusebenza lufakwa khona ngama-megabyte angaphezu kwe-180. Inketho engiyikhethile kube yi- "BleachBit njengo-Administrator". I-host dns.fromlinux.fan yiyo engiyifakile:
UGonzalo Martínez: Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho okuthembekile. Esihlokweni:
Sichaza ukuthi kungani sikhethe i-Debian, i-CentOS, ne-openSUSE distros yochungechunge lwezihloko ze-SMB. I-Debian yi-Universal, kuyilapho i-CentOS - Red Hat, ne-openSUSE - SUSE ingama-distros aqonde kakhulu ebhizinisini ngokombono wama-blogger amaningi, kanye nabagcini bawo nabaxhasi abanamandla. Sibhale izindatshana ezimbili kuma-distros amabili wokugcina, ngendlela yokwethula, futhi ngikumema ukuthi uzifunde, uma ungakakwenzi lokho. Lezi izi:
Uma sibhala ngoDebian, sibhala ngobaba womndeni omkhulu nangamaphakheji we -deb. Uma sikwenza kuCentOS - Red Hat, kwenzeka into efanayo, kepha ngamaphakeji we .rpm.
Ukukhethwa kwama-distros kwakungeyona neze imikhosi. Kwakususelwa emqondweni ophusile. Ngokwami ​​angikwazi ukumboza ukwabiwa okuningi ukubhala ngezinsizakalo zenethiwekhi kumanethiwekhi we-SMB, ngoba ngicabanga ukuthi ngingahlanya. 😉
Ngokwami, ngiyakumema ukuthi ubhalele yona le bhulogi iDesdeLinux, mayelana nama-distros esingakhulumi nawo, ngoba ukhombisa ukuthi ukwenzile ezikhathini ezedlule. Ngiyethemba ukuthi uLuigys Toro, umphathi wethu, ucabanga ngendlela efanayo.
Ngingathanda ukukwazi ukunikela, yize eminyakeni emi-2 eyedlule ngishintshele ku-Mac futhi ngisebenzisa i-OS X isikhathi esiningi, ngisayisebenzisela umsebenzi (womsebenzi wami kanye ne-VPS enamaphrojekthi athile).
I-FromLinux iwindi elivulekile lanoma ngubani ofuna ukufaka ulwazi lwabo ekufundeni komphakathi. Okuhlangenwe nakho okuqoqiwe kwababhali yilokho okuvumela ama-novices amaningi kanye nochwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene ukuthi bafeze imisebenzi eminingi futhi engcono ehlobene ne-Linux
Ungayifaka kanjani iVesta Control Panel ngemizuzu
Nikeza ubuso obusha ku-Ubuntu Software Center enengqikithi ye-Arc Dark